Global Voices teny Malagasy · 25 Marsa 2012
Tantara tamin'ny 25 Marsa 2012
Tamin'ny 20 Martsa 2012 manodidina ny mitaotaovovonana, namely ny faritra atsimo sy afovoan'i Meksika ny horohorontany. Tsapa fa mahery kokoa ilay horohorontany tao amin'ny firenena Oaxaca, Guerrero, Morelos ary tao afovoan-tanànan'i Meksiko. Araka ny vaovao avy amin'ny Sampan-draharaha Misahana ny Fihovitry ny Tany Ao Meksika (Mexican National Seismological Service) (@SimsologicoMx), toy izao ny...
Azia Atsimo25 Marsa 2012
Ato amin'ity antontan-kevitra manaraka ity dia hampahafantarinay anao ny mpaka sary iray, GMB Akash, izay manana photoblog feno tantara mampalahelo, fijaliana, hafaliana sy fanantenan'ny olon-tsotra ao Bengladesh. Nanaitra ny sehatra iraisam-pirenena ny fanehoany an'i Bengladesh tamin'ny endriny maro
Teo anivon'ny fiampangana maro nahazo ny polisy mikasika ny kolikoly ataon'izy ireo ao Honduras, hetsika ara-kolotoraly nentim-paharazana fanao isan-taona ao an-tananàn'i Sabanagrande,no nampiakatra ny fahatezerana teo amin'ireo olon-tsotra sy ny polisy. Antokonà mponina maro no namaly ny famoretana tsy misy antony nataon'ireo polisy tamin'ny alalan'ny fananganana Komity Miaro ny Zon'olombelona...